WARARKA BARAAWEPOST aXAD 10 february 2008
Waxaan nuxurka taariikhda Baraawe ee ku daabacan Websitka baraawepost ka dhadhamiyay in qoraagu uusan aqoon buuxda u lahayn taariikhda Baraawe amaba uu si bareer ah uga tagay qaybo kamid ah taariikhdaas oo uusan jecelysan waxaana taa daliil u ah in uu si bareer ah uga tagay in uu taariikhdaas ku muujiyo ”Taariikh nololeedka (biography) Xaaji Cabdulqaadir Cabdiyow.
Soomaalidu waxay tiraa marka wax la daboolo ama la qariyo ama wixii jiray la dafiro, waa la ogaan, Marka ma habboon in la wiiqo taariikhda Odayaasheena, Adduun-weynahana yaan laga qarinin sumcaddii, sharaftii, xadaaraddii iyo waayo-aragnimadii ay ku lahaayeen dadka iyo dalka gudihiisa iyo dibadiisaba.
Runi lafa ma jabiso ee yaan laga gabanin, Ilaahna ha laga cabsado.
TAXANAHA SILSILADA SALDANADA REER TUNNI IYO MARAAXILKII AY SOO MARTAY:
Mar hadday waayo aragnimada taariikhda laga dhaxlaa tahay ilayska mustaqbalka lagu ifsado ee waxay kale oo majare habawsanaanta iyo iska indho tiridda xaqiiqadu doorka ugu weyn ka ciyaartay in xal loo waayo ama runta laga sheegi waayo khilaafka dabada dheeraaday ee la xiriira ”Mansabka Saldanada Reer Tunni”, anigoo halkaa ka duulaya, isla markaana dareensan baahida weyn ee ay Bulshada R/B. u qabto qoraallo ka dhar la’ xinka iyo jibadda ”reerba reer amaba Kooxiba koox” gar darrada oo dhan dusha ka saarayso, ayaa ila noqotay in aan halkan ku soo bandhigo qodobka kor ku xusan, waxaana mahad weyn iga mudan ilaha warbixineed ee aan Maqaalkan kooban u raad raacay iyo dhammaan dadkii iga aqbalay in aan waraysto talooyin dheeraadna iigu deeqay.
1. MARXUUM XAAJI CABDULQAADIR CABDIYOW:
Waagii Sayid Al Barqash, gaar ahaan markii Magaalooyinkii Xeebaha ku yaal sida: Muqdisho, Marka, Baraawe, Warshiikh iyo Kismaayo gacanta u galeen Saldanadii Zanjibaar, waxaa Magaalada Baraaw iyo Baadiyaheedaba Suldaan ka ahaa ”Xaaji Cabdulqaadir Cabdiyo”. Sida ku cad Kutubada taariikhda ee laga qoray Soomaaliya, gaar ahaan Kitaabka ”Manaaqib Sheekh Nuurayni bin Axmed Saabir”. Sida ku cad Cutubka 11-aad ee Manaaqibkaas, waxaa ku xusan qisadii ku saabsanayd markii Suldaanki Sanjibaar uu amar ku bixiyay in Xabsiga loo taxaabo Sheekh Nurayni, oo qaar ka mid ah shacbiga R/B. ay Sheekha ku eedeeyeen in uu khilaafay Caqiidada iyo Dhaqanka suuban ee Islaamka.
Suldaankii Sanjibaar wuxuu qorsheeyay in marka hore Suldaanka Tunni Xaaji Cabdulqaadir Cabdiyow laga dhaqaajiyo Baraawe isagoo looga cabsaday in uu is hortaago xarigga Sheekh Nureyni, kadibna ay isku dhacaan Ciidanka & raaciyadda Degaanka Baraawe. Sidaas darteed, Suldaankii Sanjibaar wuxuu casumay Suldaan Xaaji Cabdulqaadir, wuxuuna u soo diray Doon inay soo qaado, geeysona Jasiirada Sanjibaar. Dhacdadaan siday ku dhamaatay, waxaad ka heli kartaan ”Cutubta 11aad ee Kitaabka Manaaqibka Sheekh Nuurayni,” fadlan akhriya si aad u kororsataan aqoontiina, xaqiiqadana u ogaataan.
Isla xilligaas, Aw Faqi Xaaji Awiis wuu noolaa, Degaanka Baraawena wuu ku sugnaa, aadna way iskugu fiicanaayeen isaga & Sheekh Nuurayni, hase yeeshee, wax xil ah ma uusan haynin waqtigaas, laakinse wuxuu ahaa nin magac iyo sharafba ku lahaa dadkiisa iyo xukuumada markaas ka jirtay Degmada Baraawe.
isla Kitaabka Manaaqibka Cutubkiisa 27aad, waxaa ku xusan in Sheekh Nuurayni uu u bishaareeyay Aw Faqi in uu ka heli doono Dowlad kasta ee Baraawe soo gaarto ”Mushahar” oo joogto ah, fadhigiisuna loogu keenaayo.
Faafaahin intaas dheer, isha mariya Cutubta 27aad ee Kitaabka Manaaqibka Sheekh Nureyni. Ciddii dan ka leh oo doonayso inay xaqiiqada ka salgaarto, ha ila soo xariiro, nuqul (copy) oo asal laga minguuriye Kitaabka ayaan u soo diri doonaa, haddii uu Eebbe raalli ka noqdo.
Khalad kale ayaan ku arkay Taariikhda Baraawe laga qoray ee ku daabacan ”baraawepost”, gaar ahaan ”faqrada (ama paragraph) ku qoran in markii xukunka Baraawe ay ku wareegtay Xukumadii Talyaaniga, uu Zanjibaar tagay Aw Faqi Xaaji Awiis si uu ugu saxiixo Talyaaniga in xukunka Baraawe uu iyaga hoos tago, hase yeeshee, taariikhda laguma qeexin habka & nidaamka uu Aw Faqi ku tegay Sinjibaar iyo sababta uu asaga u saxiixay Talyaaniga inay la wareegaan xukunka Baraawe, bacdamaa xilligaas uu Baraawe Suldaan ka ahaa Xaaji Cabdulqaadir
Haddaba, sida taariikhda ku cad, markii Saldanadii Sayid Barqash ku wareejisay Talyaaniga Magaalooyinka Xeebaha Soomaaliya ku yaal, waxaa dhacday in Bishii Oktoobar 13-keedi 1893 uu Muqdisho soo gaaray galkii la oran jiray FILONARDI oo ahaa Qunsulkii Talyaaniga u joogay Sinjibaar oo watay Markab la oran jirey ”Sotafeta”, waxaana la socday nin Wakiil ka ah Suldaankii Sinjibaar, kaas oo u sheegay Odeyaasha Dhaqanka oo uu ka mid ahaa Xaaji Cabdulqaadir Cabdiyow in Maamulka Magaalooyinkooda la wareegeen Talyaaniga. Filonardina wuxuu sheegay in maxmiyadda hawsheeda ay sii wadi doonto Shirkadda la magac baxday ”Filonardi”.
Markii uu Filonardi isku hubsaday heshiisyada macmalka ah ee uu kula heshiiyey Suldaankii Sinjibaar, ayaa haddana heshiisyo kala duwan uu la galay Odayaasha Magaalooyinka Xeebaha Benaadir, waxayna si wadajir ah ugu heshiyeen in Shirkadda Talyaaniga hawsheeda maxmiyadeed aysan dhaafin 10 Km oo miyiga ah: Muqdisho, Marka, Baraawe iyo Warshiikhna min 5 Km. in aysan marna xadkaas dhaafin.
Waxaa kale oo lagu heshiiyey in Shirkadda Filonardi aysan faragelin diintooda, caqiidadooda iyo dhaqankoodaba iyo in ay dadku isku xukumaan Shareecadda Islaamka, isla markaasna waxaa go’aan lagu gaaray in heshiiska ay gaareen labada dhinac (Odayaasha & Filonardi) lagu saxiixo Suldaanka Sinjibaar hortiis ayna saxiixaan Odayaasha heshiiska la galay Filonardi ama ciddii ay wakiishaan.
Sidaas darteed, ayaa Suldaan Xaaji Cabdulqaadir, kadib markii uu la tashaday Odayaasha kale ee Tunni Shangamaas, Toore & Todoba Tol ayuu u wakiishay Aw Faqi in uu ka mid noqdo xubnaha Odayaasha aadaaya Sinjibaar, si ay qalinka ugu duugaan Suldaanka Sinjibaar hortiisa, heshiiskii ay la galeen wakiilkii Dowladda Talyaaniga ah Mr. Filonardi.
Xaqiiqada waa sidaas ee ma ah sida ku xusan ”Taariikhda Websitka baraawepost” in Aw Faqi Sinjibaar tegay, una saxiixay Talyaaniga in Xukunka Baraawe uu iyaga hoos tago, waxaana taa daliil u ah arrimaha hoos ku taxan:
HALKAN KA AQRISO QAYBTA 1AAD 2AAD